Mgbịrịgba ọnụ ụzọ vidiyo mgbanaka na ese foto nchekwa dị ugbu a na Spain | Akụkọ akụrụngwa
Maka ndị niile na-amaghị, mgbanaka, bụ ụlọ ọrụ na-etinye aka na nyocha nke ụlọ na ese foto nchekwa. Ndị a nwere njikọ Wi-Fi ma nwekwa mgbịrịgba ọnụ ụzọ vidiyo nwere igwe foto dị mma nke na-enye anyị ohere lee ozugbo na ngwaọrụ mkpanaka anyị ma ọ bụ mbadamba, yana gam akporo ma ọ bụ iOS ihe niile na-eme n’èzí ụlọ anyị.
Ebumnuche nke ngwaahịa Ring bụ iji belata mpụ na agbata obi site na ịmepụta "mgbanaka nke nchekwa" gburugburu ụlọ anyị na ihe niile dabere na ya mezie ọnụahịa nke ngwaahịa ha ruo na nke kachasị na karịa ijikọghị ndụ anyị na akụrụngwa ahụ nke ese foto. O doro anya na ụfọdụ ngwaahịa ha chọrọ ma ọ bụ nye ndụmọdụ ka ndị ọkachamara wụnye ya, mana ọ bụghị na ngwaahịa niile.
Fewbọchị ole na ole gara aga, anyị hụrụ mwepụta nke ọhụrụ n'ụlọ nche usoro site na mgbanaka ahụ. Ọzọkwa ụlọ ọrụ ahụ bụ akụkọ kemgbe ugbu a na-amalite njem ya na mba anyị ya na katalọgụ ya niile nke ngwaahịa dị maka ndị chọrọ ichebe ụlọ ha. Site taa ụlọ ọrụ na-ekwuwapụta na a pụrụ ịzụta ngwaọrụ mgbanaka ya niile na Spain site na weebụsaịtị nke ya mgbanaka.com, Amazon, Media Markt, Fnac, Intecat, Macnificos, na ebe ndị ọzọ pụrụ iche.
Ndị a bụ ngwaahịa a na-ere site na taa na mba anyị:
Ring Video Doorbell: A pụrụ iche Mee N'onwe Gị (Mee Onwe Gị) ihe nchebe ụlọ, ya na nhọrọ nhọrọ abụọ, njikọ Wi-Fi, mgbịrịgba ọnụ ụzọ vidiyo nke HD nke na-agbasa ụda na vidiyo na-adị ndụ site n'ọnụ ụzọ nke ụlọ ahụ gaa ama ma ọ bụ mbadamba. O si na. 99
2 Windo Video Video: Ọgbọ nke abụọ mgbanaka mgbanaka mgbanaka agbamume nwere batrị nwere ike iwepu ma na-ewepu ya, ihe nkiri 1080p HD, yana ọhụhụ abalị. Ihe mara mma, nke a maara nke ọma na-abịa na ụlọ ndị nwere ike ịgbanwe nke na-eme ka mgbanaka Video Doorbell 2 bụrụ nke zuru oke n'ụlọ ọ bụla. Dị ka onye bu ya ụzọ, ọgbọ nke abụọ gụnyere nkwukọrịta ụzọ abụọ yana ihe mmetụta ngagharị ma nwee ike jikọta ya na mgbịrịgba ọnụ ụzọ dị adị. Odikwa site na € 199
Ring Video Doorbell Pro: Nke a adịchaghị Wi-Fi ejikọrọ doorbell na kọmpat imewe awade a sleek imecha na elu atụmatụ, gụnyere a customizable ngagharị ihe mmetụta. Na 24 VAC transformer gụnyere na ngwugwu, Ring Video Doorbell Pro na-ejikọ ozugbo na mgbịrịgba ọnụ ụzọ dị. Maka € 279 (ọkachamara echichi akwadoro).
Ring Video Doorbell Elite: Ngwaahịa mbụ nke ụdị ya Kwadoro n'elu Ethernet (PoE), Ring Video Doorbell Elite bụ ọkachamara na-ewepụ mgbịrịgba ọnụ ụzọ vidiyo na usoro dị ọcha. Kwadoro site na Ethernet, ọ na-enye njikọ dị nchebe karịa na nchekwa nchekwa ụlọ, na-enye gị ohere ịnọ n'ịntanetị, na-agba ike, ma nweta vidiyo kacha elu HD na ọdịyo site na mkpịsị aka onye ọrụ. Maka for 499 (ọkachamara echichi akwadoro).
Battery Chakwasa ihie Cam: Igwe batrị Ring Chart Cam dị mfe ịwụnye igwefoto igwefoto HD na-ekpuchi iji kpuchie ụlọ ndị na-adịghị ike nke ụlọ kwesịrị ilele. Mgbe igwefoto na-achọpụta mmegharị, ndị ọrụ na-enweta ọkwa na ama ha, mbadamba ma ọ bụ kọmputa, iji hụ, nụ ma gwa onye ọ bụla okwu. Site na Cams Chakwasa ihie, ị nwedịrị ike ịgbalite mkpu ma gbanye ọkụ ọkụ site na ngwaọrụ gị, n'agbanyeghị ike na nhazi chọrọ. Maka € 229
Chakwasa ihie Cam Battery Solar Panel: Iji mee ka Batrị Chakwasa Igwe batrị na-ebo ebubo, Ring na-enye Spotlight Cam Battery Solar Panel, nke ya na Spotlight Cam Battery na-enye ụgwọ na-aga n'ihu. Site na wiwi na ngwa ọrụ gụnyere ya, enwere ike itinye ya na nkeji ole na ole. Maka € 59
Ring Chakwasa ihie Cam Wired: Onye ọrụ ahụ nwere ike ichebe ma nyochaa ụlọ ha site na Spotlight Cam Wired, igwefoto nche igwefoto nwere 1080p HD vidiyo vidiyo na ihe mmetụta ngagharị dị elu. Site na nkwukọrịta ụzọ abụọ, mbara ikiri sara mbara, ọhụụ abalị, na ngosiputa wuru n'ime ya, onye ọrụ nwere ike ịhụ, nụ, ma gwa onye ọ bụla ihe onwunwe ha site na ngwaọrụ ọ bụla. Odikwa site na € 229
Igwe Igwe Igwe Igwe: Ọ na-ewe awa ole na ole nke ìhè anyanwụ kwa ụbọchị iji mee ka igwefoto na-akwụ ụgwọ mgbe niile. Batrị Spotlight na-ejikọ na ogwe ọkụ nke na-aga n'ihu na-akwụ ụgwọ. Ọ gụnyekwara mkpọ batrị nwere ike ịgbanye ya, yabụ onye ọrụ ga-enwe batrị ndabere, ọ bụrụ na ọ dị mkpa. Maka € 269
Iju Mmiri Cam: Ike, dị mfe iji wụnye igwefoto nche iji nyochaa nkuku na ebe ìsì gburugburu ụlọ. Ndị nwe ụlọ nwere ike ime ka ụjọ jide ndị omekome ma mee ka ndị agbata obi ha mara ma ọ bụrụ na ha achọpụta ọrụ enyo site na ịgbalite mgbaama ngwangwa site na bọlbụ ike dị elu na mkpu siren nke ngwaọrụ ahụ, sitere na igwe okwu. Maka € 299
Mgbanaka Chime Pro: A Wi-Fi booster na doorbell maka mgbanaka ngwaọrụ. Chime Pro dabara na ngbanye ọ bụla, gbasaa akara Wi-Fi, ma mee ka ị mara ozugbo mmadụ nọrọ n'ọnụ ụzọ. Nwere ike ịhọrọ site na ụda mgbanaka dị iche iche ma gbanwee olu ya. Chime Pro dị maka € 59
Nke kachasị mma, ha nwere ngwọta maka mmefu ego niile na ntinye nke akụrụngwa dị mfe. Maka ugbu a ọnụahịa nke ngwaahịa ha Ha na-amalite site na euro 99 ruo ihe dị ka euro 499.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Ngwa » Mgbịrịgba ọnụ ụzọ vidiyo na igwefoto nche dị ugbu a na Spain
Dabere na data Gartner, Huawei wepụrụ Apple na-arụpụta ekwentị nke abụọ